Sarkaal ka tirsanaa Wasaarada Warfaafinta Dowlada Soomaaliya oo lagu dilay Muqdisho.
Home»Somali News»Sarkaal ka tirsanaa Wasaarada Warfaafinta Dowlada Soomaaliya oo lagu dilay Muqdisho.
Facebook	Twitter	Sunday, August 12 2012	Sarkaal ka tirsanaa Wasaarada Warfaafinta Dowlada Soomaaliya oo lagu dilay Muqdisho.	Written by Admin
Add comment	Waxaa Saaka lagu dilay Gudaha Magaalada Muqdisho Sarkaal ka tirsanaa Wasaarada Warfaafinta Dowlada Soomaaliya,kaasi oo ay toogteen sida la sheegay kooxo ku hubaysan batoolada Xili uu ku sugnaa Deegaanka dharkinlay ee Gobolka Banadir.
Yuuusf Cali Cismaan ( Yuusuf Farey ) Allaha u naxariistee waxaa uu horay ugu shaqayn jiray Radio Muqdisho,Waxaana goob joogayaal la hadalay Warbaahinta ay sheegeen in Nin ku hubaysan Bastoolad uu Yuusuf ku toogtay goob garaash ah oo uu gaaari uga xaraysnaa Degmada Dharkinlay.
Ciidamo ka tirsan Dowlada ayaa gaaray goobta lagu dilay Yuusuf Farey,iyadoona ilaa iyo hada aanay jirin cid loo soo qabtay dilka sarkaalkani,marka laga reebo su aalo ay laamaha amaanka ay weydiinayaan dad ka agdhowaa goobta uu dilka ka dhacay.
Yuuusf Cali Cismaan Allaha u naxariistee Waxaa isla maanta lagu aasay magaalada Muqdisho,waxaana dilkiisu uu qayb ka noqonayaa dilal qorshaysan oo mudooyinkii aynu soo dhaafnay ka jiray Magaalada Muqdisho.	Social sharing
VIDEO+SAWIRO : Maxkamada Ciidamada qabalka sida ee Punntlan oo Xukuno ku riday dhalinyaro ka tirsan Alshabab.
Maxkamada Ciidamada Boosaaso oo xukun dil ah ku riday dadkii ka dambeeyay dilkii Allaha u naxariistee Dr Axmed Xaaji C/raxmaan.
DHAGAYSO : Madaxweynaha Puntland oo ka digay majaraha habaabin in lagu sameeyo dilka Suldaan Muuse Faarax ( Muuse Onkod ) .
« Madaxweynaha Puntland oo is badal ku sameeyay Laanta Sirdoonka,kadib Dilal Qorshaysan oo dhacay.	Xaalada Magaalada Kismayo oo degen kadib duqayno Maraakiibta Dagaalka Kenya ay Magaaladaasi la beegsadeen. »